बन्दाको सुप खाएर १ हप्तामै तौल घटाउनुहोस, ७ दिने डाइट प्लान सहित – Online Palanchok
बन्दाको सुप खाएर १ हप्तामै तौल घटाउनुहोस, ७ दिने डाइट प्लान सहित
काठमाण्डौ – यदि तपाईलाई बन्दा काउलीको सुपले एक हप्तामा शरीरको अनावश्यक बोसोलाई पगालेर तौल घटाउँछ भन्ने कुराको जानकारी छैन भने आज हामी बन्दाको झोल सेवन गरेर जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै छौं ।
जति धेरै यो सुप सेवन गर्नु हुन्छ त्यति नै मात्रामा शरीरको क्यालोरी घट्छ किनकि यो सुपमा क्यालोरीको मात्रा शुन्य बराबर हुन्छ । वास्तवमा यो सुपले भोजनको काम गर्छ जसमा क्यालोरीको मात्रा शुन्य बराबर हुन्छ । अनि यसका कारण तपाईको मेटाबोलिज्ममा बृद्धि हुन्छ र परिणामसरुप तपाईले प्राप्त गरेको क्यालोरी भन्दा तपाईको शरीरको क्यालोरी घटेर जान्छ । अझै तपाईले आफ्नो शरीरको विषादी नाश गर्न सक्नुहुन्छ र शरीरलाई चाहेको आकारमा ढाल्न सक्नुहुन्छ ।
सुपका लागि चाहिने सरदामहरु : – एउटा ठूलो बंदा, मसिनो पारेर काट्नुपर्छ – आधा किलो छोडाएको हरियो मटरकोसा – २ वटा हरियो खुर्सानी, काटेको – ६ वटा हरियो प्याज, मसिनो काटेको – आधा किलो गाजर, मसि काटेको – एक पाउ टमाटर, गोलो पारेर काटेको – थोरै नुन – थोरै मात्र मसला
सुप तयार पार्ने बिधि: सब्जीको मीश्रणलाई एउटा भाँडामा खन्याउनुहोस् । यसमा थोरै मसला मिसाउनुहोस् । यसमा आवश्यकता अनुसार पानी मिसाउनुहोस् र यसलाई चुलोमा दश मिनेट सम्म मधुरो आगोमा उमाल्नुहोस् । तरकारी मज्जाले नपाके सम्म उमाल्नुपर्छ ।
सात दिने डायट प्लान:
पहिलो दिन: सुप र फलफुल मात्र खानुहोस् । पानी तथा कालो चिया चिनि थोरै राखेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । केरा बाहेक सबै प्रकारका फलफुल खान सकिन्छ किनकि केरामा क्यालोरीको मात्रा बढी हुन्छ ।
दोस्रो दिन: अन्य हरियो सब्जी र सुप मात्र सेवन गर्नुहोस् । सुखेको सिमि, भटमास, मकैको सट्टामा हरियो सागसब्जी खानुहोस् । राती सुप सँगै उसिनेको आलु खानुहोस् तर रातको समयमा फलफुल भने खान हुँदैन ।
तेस्रो दिन: बिभिन्न प्रकारका सुप, सागसब्जी तथा फलफलुल खान सक्नुहुन्छ । तर राती आलु खान हुँदैन । तपाईले यो सात दिने तौल नियन्त्रण बिधि तिन दिन सम्म उपयुक्त तरिकाले अपनाउनु भएको छ भने तपाईको शरीरको तौल ४-५ किलो घटेको हुनुपर्छ ।
चौथो दिन : चौथो दिनमा केरा र दुध खाने दिन हो । यी दुबै केरा र दुधमा प्रसस्त मात्रामा क्यालोरी तथा कार्बोहाईड्रेट लुकेको हुन्छ । तर यो चौथो दिनमा तपाईको शरीरलाई पोटासियम, कार्बोहाईड्रेट, प्रोटिन र क्याल्सियमको आवश्यक पर्छ जसले शरीरको प्रक्रियामा गडबड हुनदिदैन । सुपका साथै तीन वटा केरा तथा चाहे जति दुध पिउनुहोस् ।
पाँचौ दिन : ६-७ वटा टमाटर, छाला नभएको कुखुराको मासु तथा माछा अवश्यकता अनुसार तयार पार्न सक्नुहुन्छ । पानी कम्तीमा पनि ६-८ ग्लास पिउनुहोस् । यसले युरिक एसीडलाई सफा पार्छ । सुप कमसेकम दिनको एक पटक पिउनुपर्छ ।
छैठौं दिन : तपाईले चाहे जति छाला नभएको कुखुराको मासु, सिमि, केराउ, माछा लगायतको सागसब्जी यो छैठौं दिनमा खान सक्नुहुन्छ । तर तारेको आलु भने खान हुँदैन । बंदाको सुप भने यो दिनमा पनि कमसेकम एक पटक पिउन बिर्सिनुहुँदैन ।
सातौं दिन : हरियो सागसब्जी तथा खैरो चामलको भात । फलफुल तथा हरियो सागसब्जी जति खाए पनि हुन्छ । अनि सुप यो दिनमा पनि कमसेकम एक पटक पिउनु पर्छ ।
डायट प्रोग्राममा सुझाए अनुसारको सल्लाह तपाईले अपनाउनु भएकोले तपाईको शरीरको तौल ७(९ किलो घटेको हुनुपर्छ ।
Posted in रोचक, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevछिटो बच्चा जन्माउन चाहनुहुन्छ ? यो तरिकाले सहवास गर्नुस, गर्भधारण पक्का ! यस्ता छन् ४ तरिका
Nextआज फेरी नेपाल र जापान बीच भयो अत्यत महत्वपूर्ण सम्झौता, अब काठमाडौँ–जापानबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन हुने
काठमाण्डौ मा डान्सबारमा नाच्ने कान्छीमायाको अर्कै धन्दा थाहा पाउदा प्रहरीनै चकीत ( सेयर गरौ
नेपाल भर्सेस यूएईः टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको नेपालको उत्कृष्ट ब्याटिंग , ५० रन पुरा (हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो)
भाग्य चम्काउनु छ भने राशि अनुसार यस्तो रत्न लगाउनुहोस् ! हेर्नुहोस् विष्तृतमा !
भाईरल भिम बहादुर बिकलाई श्रीमतीको डर ! लट्टीपट्टी पारेर भागी भने के गर्ने ? (हेर्नुहोस भिडियो)
निर्मला पन्त परिवार बिच पर्‍यो ठूलो झगडा ||केहि… (3)